प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व लडाकूको अडियो रहस्य ! « Ok Janata Newsportal
प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व लडाकूको अडियो रहस्य !
काठमाडौं । केही समय अगाडिको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई कुहिएको फर्सीको संज्ञा दिए । यति मात्र होइन, माओवादी जनयुद्धले जनतालाई सास्ती मात्रै दिएको र परिवर्तन केही हुन नसकेको जिद्धी गरे ।
आखिर किन ? प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई कुहिएको फर्सीको संज्ञा दिए त ? यो चौतर्फी बहसको विषय बनेको थियो । तर, उनले प्रचण्डलाई काउन्टर दिन र बोल्ने अरु शब्द नपाएपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिएको धेरैको बुझाइ थियो ।
हिजोका दिनमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व कुटिएका, पिटिएकाहरुले न्याय नपाएको भन्दै प्रधामनमन्त्री ओली प्रचण्डविरुद्ध बारम्बार कुर्लिने गरेका छन् । प्रचण्डले आफ्ना छोराछोरीको लागि मात्रै युद्ध गरेको ओलीको ठहर छ । साच्चै जनयुद्ध यस्तै हो त ?
राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन्, ‘माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वले चेतनाको विकास गरेको छ, केही जागरुकता ल्याएको छ यसलाई कुहिएको फर्सीका रुपमा चित्रण गर्न भने मिल्दैन । द्वन्द्वको समयमा भएका तमाम अराजकता भने निकृष्ट थिए ।’
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही जनयुद्ध लडेका सिपाहीहरुसँग वार्ता गरिरहेका छन् । यतिमात्र होइन एक पूर्व लडाकूसँग भएको टेलिफोन वार्ताको अडियो समेत सार्वजनिक भएको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री ओलीले ती जनमुक्ति सेनाका लडाकूलाई ढाडस दिएको सुनिन्थ्यो ।
यो अडियो नियोजित रुपमा बाहिर ल्याइएको धेरैको बुझाइ छ । पूर्व लडाकूसँग वार्ता भइरहेको पार्नका निम्ति अडियो बाहिर आएको जानकार बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले भरपूर प्रयत्नमा उनीहरुलाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइमा कुहिएको फर्सीसँग लडेका जनमुक्ति सेनाका लडाकूले भने यो विषयमा निर्णय लिइ सकेका छैनन् । यद्यपी ओलीले कालीबहादुर खामलगायतका केही पूर्व लडाकूलाई आफूसँग तान्ने प्रयास गरेका छन् ।